Usoro nke ịkọ ụda: ihe ọ bụ, otu esi etu mkpụrụ
N'ime ugbo ndi na-amu amu, a na-eji osisi eme ihe n'ubi. Iji mewanyewanye germination na mmepe kwesịrị ekwesị, a na-eji ịkụ ụta mee ihe n'ọtụtụ ọnọdụ, n'ihi ya onye ọ bụla na-elekọta ubi kwesịrị ịma ihe ọ bụ na otu esi eme nke a n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Kedu ihe bụ ịkọ ihe?
Gịnị bụ stratification na ụdị maka?
Okwu "stratification" mgbe ụfọdụ na-atụ egwu naanị ụda ya, ọ na-ada ụda na sayensị. Otú ọ dị, onye ọ bụla nwere ezigbo okpomọkụ, onye na-elekọta ugbo ma ọ bụ onye na-ere ugbo ala n'oge na-adịghị anya, chere ihu na usoro a. Ka anyi hu ihe di iche iche nke osisi na otu esi eme ya. Ị ma?